Ny kaody Pokémon GO dia manambara ny fahatongavany tsy ho ela ao amin'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Ny kaody Pokémon GO dia manambara ny fahatongavany tsy ho ela ao amin'ny Apple Watch
Hisy Pokémon GO ho an'ny Apple Watch ve sa tsy misy Pokémon GO ho an'ny Apple Watch? Ny marina dia, raha tsia ny valiny, dia tsy niresaka momba izany i Apple tamin'ny fehezanteny fototra tamin'ny septambra lasa teo. Efa fantatray ny antony fanemorana ny fahatongavany, saingy mbola tsy misy daty famotsorana ofisialy. Izay ananantsika dia Fanondroana ny famantaranandro paoma ao amin'ny kinovan'ny Pokémon GO ho an'ny Android, Ny rafitra fandidiana finday an'i Google.
Araka ny Silph Road, maro amin'ireo fanondroana ireo no milaza antso ho an'ny famantaranandro Cupertino sy ny fifandraisana mifanentana izay haseho. Ny firesahana hafa dia miresaka kaody handefasana ny elanelana izay nandehananay avy eo amin'ny famantaranandro mankany amin'ny fampiharana iPhone lehibe na ny Pokédex. Tsy misy kaody miresaka momba ny HealthKit mihoatra ny halaviran-tongotra izay refesina mandrakariva ny rafi-pahasalamana Apple.
Pokémon GO ho an'ny Android dia manamafy ny fahatongavan'ilay lalao amin'ny Apple Watch
Etsy ankilany, toa izany Mbola mila miandry ny mpampiasa Android Wear kely kokoa, satria tsy mbola nisy ny fanambarana miresaka momba ny fahatongavany ao amin'ny rafi-pandidiana smartwatch Google ary tsy misy tsaho mihevitra antsika fa ity andiany ity dia noheverina. Ankoatr'izay, raha jerena fa mihemotra ny fahatongavany ao amin'ny Apple Watch i Niantic mba hanomezana tombony ny varotra amin'ny fehin-tànany manokana, dia toa tsy liana amin'ny fandefasana kinova bebe kokoa ho an'ny fitaovana maro kokoa izay mety hangalatra ny varotra amin'ny fitaovany manokana.
Pokémon GO ho an'ny Apple Watch dia ho fampiharana tena mahaliana ho an'ny tompona paoma paoma izay mbola milalao ny lohateny malaza an'ny Niantic, satria hahafahan'izy ireo hahafantatra raha misy Pokémons na Poképaradas nefa tsy mila mijery ny iPhone foana. Mazava ho azy, hihaza ny iray amin'ireo "Pocket Monsters" kely dia tsy maintsy mamoaka ny iPhone ianao handefasana ny Pokéball. Ny azontsika atao dia ny manangona ireo entana avy amin'ny Poképaradas amin'ny famantaranandro. Izahay dia mamela anao amin'ilay fampisehoana video an'ny Pokémon GO ho an'ny Apple Watch izay hitanay tamin'ny fehezanteny tamin'ny volana septambra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ny kaody Pokémon GO dia manambara ny fahatongavany tsy ho ela ao amin'ny Apple Watch
Ny Twitter dia manandrana ny fampandrenesana vaovao toy ny fanapoahana baomba farany natao tany Berlin
OneDrive dia maniry antsika hanadino mandrakizay ny taratasy amin'ny fanavaozana farany